I-Apartment kwi-villa, kufuphi nolwandle. Ixabiso lundwendwe ngalunye.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJesper & Helena
Indlu enesango layo lokungena kumgangatho ophantsi wevilla esezantsi kwiGrundsund entle eSkaftö. Indawo yokuhlala ezolileyo ekufutshane kakhulu namanzi kunye neejethi ezineleli yokuhlamba. Akukho mbono wechibi.
Malunga ne-10 min ukuhamba ukuya kwivenkile yokutya (kunye nokuthenga, ivenkile yeentlanzi / indawo yokutyela ehlotyeni). Malunga ne-15-20 min ukuhamba ukuya kwindawo yokuhlambela elunxwemeni, ichweba elinendawo yokuhamba kunye nokutshona kwelanga okumnandi, amawa, iindawo zokuloba njl.njl.
Ilanga lakusasa kwibala eligangathiweyo ngaphandle komnyango, kunye nomthunzi opholileyo ngokuhlwa.
Indawo yokulala ifaneleka kakhulu ngabantu aba-2, kodwa kunokwenzeka ukuba ibeyi-4 ubuninzi (umz. usapho). Ipaseji ukuya ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela lidlula kwigumbi lokulala.
Ifanele abo bafuna ukusondela ekulobeni, ukuqubha, i-kayaking, i-windsurfing, njl., okanye abo bafuna nje ukuthabatha lula kwaye bahambe ngeendlela ezintle ukuya kwimbono evela e-Islandsberg ngokomzekelo. Ukuba uyayithanda igalufa, kukho zombini i-Pay kunye ne-Dlala kunye neklabhu yegalufa ekufutshane.
Kwi-marina yase-Grundsund, kunokwenzeka ukuba uqeshe isikhephe semoto, kunye ne-sauna eyenziwe ngamaplanga kwi-pier. Kukwakho nevenkile yeenqanawa enezixhobo zokuloba nokunye okuninzi, kunye neziko le-kayak elinerenti kunye nezifundo.
Ivenkile yegrosari ivuliwe unyaka wonke, kwaye ngexesha eliphezulu ehlotyeni, kukho ukuthenga okulungileyo kwiindawo ezininzi kwisiqithi. Ehlotyeni kukho i-cafe epholileyo ngase-marina, kunye neendawo zokutyela ezininzi ezinokutya okulungileyo kufutshane. Ezinye iingokuhlwa zikwabonelela ngokuzonwabisa komculo kwabo bawuthandayo.
4.58 · Izimvo eziyi-40
I-Skaftö sisiqithi esihle sokuhlala unyaka wonke kunye nokhenketho. Iimbono ezintle ezinamawa, ulwandle kunye neendawo zokuzonwabisa eziluhlaza. Akukho kude eLysekil okanye e-Uddevalla, kwabo bafuna amava esixeko. Abantu balapha banobubele be-ovalolo ingakumbi abamelwane bakule ndawo yethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Jesper & Helena
Siyafumaneka kwimibuzo ngefowuni, nge-sms okanye nge-app, ngoko ke unokusazisa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lysekil S